musha nyika dzakabatana Singers Mukadzi Gaga Nyaya Youcheche Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yemuimbi weAmerica anozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti “Amai Monster“. Yedu Lady Gaga Yehucheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongorora kunosanganisira nyaya yehupenyu hwake pamberi pemukurumbira uye nhoroondo yemhuri. Kunyanya zvakadaro, mazhinji OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvekupfeka kwake flamboyant uye anonyanyisa mazwi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Lady Gaga's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Lady Gaga Yemwana Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Kutanga kubva, Lady Gaga (akadzivirirwa Stefani Joanne Angelina Germanotta) akaberekwa musi we 28th waMarch 1986 paLenox Hill Hospital muNew York City, United States.
Akanga ari mwana wokutanga akaberekwa naamai vake, Cynthia Louise (muterevhiri mutsigiri) uye kuna baba vake Joseph Germanotta (mutengesi webhizimusi we internet).
Kuzvarwa kune vabereki vakapfuma, Young Gaga aive nemavambo akanaka ehupenyu mumhuri yeKaturike ine midzi yeFrance neItaly. Akange akakomberedzwa nerudo kubva kuvabereki vake uye hanzvadzi yake chete Natali - shamwari yehucheche yaakakurira nayo kuUpper West Side yeManhattan.
Kufanana nevazhinji vanobudirira maAmerican maartist, kubudirira kwaGaga muindasitiri yemimhanzi kwaive kusiri kwekupenga sezvo aigara achiratidza kuda kwakasimba mimhanzi kubvira achiri mudiki. Musikana mudiki ane bvudzi dema (panguva iyoyo) aiwanzoimba pamwe chete neake mini epurasitiki tepi rekodhi kune akakurumbira hits naCyndi Lauper naMicheal Jackson.
Mukuwedzera, akadzidza kugadzira mimhanzi nenzeve ne piyano uye pane imwe nguva muhucheche hwake, akatamutsa muviri wake kumanzwi anoitwa neThe Beatles uye Rolling Stones. Yakanga iri nyaya yenguva isati yasvika musikana wechidiki wepimhanzi aizotora chido chake muMusic kuenda kune dzimwe nzvimbo dzakakwirira pashure pokunge ane dzidzo yakawanda.
Lady Gaga Dzidzo:
Zvinonyanya kuzivikanwa pakati pekufambira mberi kwaGaga kweChikoro kwaive kunyoreswa kwake kuConvent kweMweya Mutsvene, chikoro chega, chevasikana vese veRoma Katurike uko Gaga yaive neruzivo rwakasangana rwezvakanaka, zvakaipa nezvakaipa.
Padivi rakanaka, Gaga anoti aive “Mudzidzi akazvipira, akadzidziswa uye anodzidza”. Anobvumawo kuva nehuipi hwakashata uye hwakaipa sekunyombwa nevezera rake nokuda kwekutarisa kwake kusingagumi uye kunokanganisa kwakamuita kuti ave asina kuchengeteka.
Nekudaro, aive akangwara zvine mutsindo uye aishingairira kuita zviitiko zvekunze zvinosanganisira kuimba kuimba pachikwata chejazz orchestra yechikoro uye kutora chinzvimbo chekutungamira mumitambo yemitambo.
Zvakare, kubwinya kwaGaga pakati pezvimwe zvikonzero kwakamubvumidza kutanga kupinda muTisch Chikoro cheUnyanzvi cheNew York University paakange ave nemakore gumi nemanomwe.
Yakanga iri kuunivhesiti iyo Gaga yaidzidza mimhanzi, kugona hunyanzvi hwekunyora rwiyo pamwe nekupa mahara kutonga kune yake eccentric kuravira mumafashoni.
Hazvina kutora nguva refu asati abva kuchikoro mushure memakore maviri ekudzidza kuitira kuti amupe basa rekuvaka muMumhanzi kutaura kwekugadzira.
Lady Gaga Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Nhanho yekutanga yaGaga mumakwara ekuwana mukurumbira kwaive kuumbwa kwechikwata chemimhanzi chinonzi SGBand (iyo SG iri yekutanga mazita ake Stefani naGermanotta). Iri boka rine nhengo dzinoita shamwari dzaGaga kubva kuNew York University rakaburitsa ma EPs maviri vasati vapatsanuka.
Kufambira mberi Gaga akabatana nemugadziri wemimhanzi Rob Fusari kukudziridza hukama hwekushanda hwakaburitsa kwete rake chete zita rekuti "Lady Gaga" asi marekodhi akamubatsira kusaina ne Def Def rekodhi rekodhi mugore 2006.
Makore gare gare, Fusari akaburitsa mabatsiriro aakaita Stefani (ayo Gaga akadaidzwa panguva iyoyo) kurova zita rake rekare-rekuti "Lady Gaga".
“Mazuva ese, Stef paakauya kustudio, pachinzvimbo chekumhoresa, ndaitanga kuimba rwiyo nechikwata chaQueen chinonzi 'Radio Ga Ga'. Ndiwo waive rwiyo rwake rwekupinda, ”
"[Lady Gaga] aitova glitch. Ini ndakanyora 'Radio Ga Ga' mune chinyorwa uye chikaita chisina kugadziriswa, saka neimwe nzira 'Radio' yakashanduka ikava 'Lady'.
Akanditumira meseji, 'Ndizvozvo.' Mushure mezuva iro, aive Lady Gaga. Iye akafanana, 'Usambofa wakandidana kuti Stefani zvakare'."
Akashongedzerwa nezita rezita renzvimbo, Gaga akapedza kusangana kwake naDef Jam muna 2007 ndokuita masevhisi eanoshanda emhizha anozivikanwa saLady Starlight.
Yaive Starlight (inofananidzirwa naGaga pazasi) uyo akabatsira kuumba onstage persona inoita kuti Gaga asiyane kubva kune vezera rake. Ivo zvakare vakatora vanoverengeka ehupenyu maratidziro pamwechete munzvimbo dzekirabhu nenzvimbo dzemimhanzi.
Lady Gaga Bio - Simuka Mukurumbira:
Hukama hwaive naGaga neStarlight hwakatanga kuwana mutepfenyuro wakanaka asati asainwa kuInterscope uko kwaakasimbisa hukama naAkon uye ndokuendeswa kuKonLive (rekodhi rekodhi raAkon) nemvumo kubva kumusoro weInterscope, Jimmy Lovine.
Kuve nekuchengetedza yakasimba rekodhi chitaridzi Gaga akatanga basa kuti aunze rake rekutanga albhu. Kusvikira izvozvi, akasangana nemugadziri wemimhanzi RedOne waakashanda naye mukurekodha nziyo dzakakosha dzeAlbum yake.
Gaga akazove nekubudirira kwake mu2008 paakadzokera kuLos Angeles kunopedzisa rake rekutanga Album iro rakanzi "Mukurumbira" pamwe nekugadzira rake rekugadzira timu inozivikanwa saHaus weGaga.
"Mukurumbira" uyo wakaburitswa musi wa19 Nyamavhuvhu 2008 waive nema singles "Just Dance" uye "Poker Face" iyo yakakwira zvikwangwani muUS, UK, Australia neCanada.
Muna 2009, "The Fame" uye "poker kumeso" zvakatorawo Gaga Grammy mibairo muzvikamu zve Best Dance / Electronica Album uye Best Dance Kurekodha, zvichiteerana. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Lady Gaga Anoda Hupenyu:
Kunyange zvazvo vamwe varume vechiAmerica vanozivikanwa vakaita saizvozvi Brad Pitt Rambai muchibvisa kufambidzana musina kukanganisa, hazvo hazvikwanisi kutaurwa nezvevamwe vakadzi vavo kusanganisira Lady Gaga ari kutsvaga kugadzirisa. Tinokuunzira humwe hukama hwakanaka hwaakange anahwo mumakore makumi emakore-basa rake.
Kutanga kwaive hukama hwake nemugadziri wemimhanzi Luc Carl pakati pa2005 - 2008. Mushure meizvozvo paive nemishumo yehukama hwaGaga nemugadziri wake wemimhanzi Rob Fusari pakati pe2008-2009 uye nemutungamiriri wekugadzira Matthew Williams kubva 2009 kusvika 2010.
2011 ndiyo gore iro Gaga akapinda muukama nemufananidzo uye mutevedzeri Taylor Kinney. Ukama hwakaratidzwa panguva yekutanga Gaga yaiva pedyo nekuroora sezvo Kinney akaita sarudzo musi wa 14th waFebruary 2015. Zvisinei, iyo duo yakanga isati yaroora uye yakaputswa muna July 2016.
Kuenda kune muimbi weAmerica uri muukama neTentente agent Christian Cabrini uyo akazvipira kune 2018.
Inoramba ichionekwa kana bhero dzechato dzichanyengeterera duo kana kuti dzinoita rumwe rutivi rwehukama.
Hupenyu Hwemhuri hwaDady Gaga:
Lady Gaga akaberekerwa mumhuri yakabudirira, tinokuudza mashoko echokwadi pamusoro pemhuri yake.
Pamusoro pababa vake: Baba vaLady Gaga Joseph, anonyanya kuzivikanwa neanodzora Joe akazvarwa pa9th yaAugust 1957.
Kunyangwe Joe akakurudzira Gaga kuti aite basa remumhanzi panguva yehudiki hwake, akazove nezvikonzero zvekukahadzika kana muimbi wemuAmerica akarasikirwa nehunhu hwake achipa maitiro eccentric ayo aizivikanwa nebasa rake rekuvaka.
Iye muzvinabhizimusi ane kambani inoisa yeWi-Fi ane, zvakadaro, anowirirana nemufambiro wemwanasikana wake uye anomuda iye zvaari.
Gaga anomuda iye muchiyero chimwechete uye seuchapupu hwechisungo chavo akanyora rwiyo "Asingatauri" mu2009 senzira yekumugombedzera kuti aedze kuvhiyiwa kwemoyo kwakashama kune yake yakashata vharuvhu yemoyo.
Pamusoro paamai vake: Amai vaLady Gaga Cynthia Germanotta akaberekwa pazuva re30th yaNyamavhuvhu 1954. Iye anozivikanwa kuve anonyanya kufarira fanita remwanasikana wake uye kazhinji anomuperekedza kuzviitiko.
Uye zvakare, ndiye mubatanidzwa-weiyo Akazvarwa Nenzira Yheyo, sangano rakafuridzirwa neGaga.
Akazvarwa Nenzira Yheyo, pakati pezvimwe zvinangwa uye zviratidzo, zvinokurudzira vechidiki kuti vagamuchire ivo pachavo norudo rwekuzvida uye pamwe nekurwisana negativo munyika muno nemabasa erudo.
Nehanzvadzi yake: Hanzvadzi yaLady Gaga Natali Germanotta ndiye anochengetedza Gaga ane makore matanhatu ekukura kupfuura iye.
Natali, uyo akapedza kudzidza kuParsons Fashoni Chikoro anoshuvira kuve muimbi uye stylist wega wehanzvadzi yake, basa raanotya kuti rinogona kuzadzikiswa nekupihwa kwaGaga uye caprices.
Lady Gaga Biography Chokwadi - Passion-Inotungamirwa Basa:
Kunyangwe chishuwo chiri hunhu hwakanaka, chinogona kukuvadza kana chakatambanudzwa kupfuura kurongeka kwechisikigo. Izvi zvakave pachena mu2010 apo Gaga aiita basa risingaregi iro rakamusiya aneta uye asina kusimba.
Nekudaro, simba rake rakamutadza panguva yekutamba muAustralia kwaaifanira kurara padenga kuti apedze showa, achisiya vateveri vake vachinetsekana nehupenyu hwake.
Kunyange zvakadaro, Gaga haabvumirwi kukumbira ruregerero nekuda kwekudya kushuva kwaaimbove akanangana nenzira inotevera.
“Ndakagara ndichida kuve nyeredzi, Zviri mumongo wemapfupa angu, manzwiro andinoita nezvemumhanzi neunyanzvi. Ndinobaira, ndobuda ropa uye handina hope nekuda kwehunyanzvi hwangu nenzira isina nyadzi uye nerudo. ”
Lady Gaga Mafirimu:
Lady Gaga haasi ese ekurekodha mimhanzi sezvaakaonekwa mumafirimu anozivikanwa pakati peanosanganisira Machete Kills (2013) uye Guta rechivi: Dame Kuuraya (2014). Akaratidzawo basa remampiric countess pasina kutarisira hupenyu kana kutambura mumutambo wekuterevhizheni American Horror Story: Hotel (2015-16).
Kuita kwake mumutambo weanthology kwakamukunda iye a Golden Globe Award. Akagamuchirawo kuvhiringidzwa kwakanyanya kwekutamba chikamu chemupenzi asina kunyengera-uye-achiuya-munyori wenziyo mumutambo we 2018 wemafirimu Nyeredzi Inoberekwa.
Lady Gaga Chokwadi cheMunhu:
Lady Gaga muimbi-anotyaira anofarira Kanye West, yakagadzirirwa urongwa hutsva hwemimhanzi hwakanga hwakasiyana nedzimwe nguva yenguva yavo. Anotenda mukuzvidzivirira uye anokurudzira vamwe kuti vave vakasununguka pasi peganda ravo sezvinoratidzwa mukurudziro rwemagariro evanhu vane kodzero dzeLGBT.
Kunyanya zvakadaro, anokweretesa kushandiswa kwezwi rake pakukurudzira zvirwere zvinouraya seHIV neAIDS pamwe chete uye anoshandisa iye akafuridzirwa Akazvarwa Nenzira Yheyo mukukurudzira vechidiki kuti varwise kusagadzikana kuri munyika nezviito zvetsitsi.
Nezve nyaya dzekutenda, Gaga muKaturike anoshanda uye haana kumborega kuziva seumwe.
Lady Gaga Chokwadi:
Gaga akaenderera mberi kune 2010 VMAs achipfekedza maitiro ake aishamisa maziso aive mumupfeko wenyama wairema 50 pounds.
Haana zvishoma pane zvinyorwa zve 19 zvose zvinoswededzwa kurutivi rworuboshwe rwemuviri wake.
Yake yakarova isina kuroorwa, "Just Dance" yakanyorwa mumaminetsi gumi, iye achiri hungover.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Lady Gaga Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!